I-Timisoara, ngentelezi yaseRomania | Izindaba Zokuhamba
I-Timisoara, ngentelezi yaseRomania
UMariela Carril | | Yini ongayibona, ERomania
EMpumalanga Yurophu Kuyintelezi yesiphetho. Amakhulu eminyaka omlando nezinhlelo zezepolitiki zishiyile uphawu lwazo futhi kunamadolobha amahle ngendlela eyisimanga. Ngokwesibonelo, Timisoara, eRomania.
I-Timosara yidolobha lesithathu ngobukhulu ezweni kanye nesikhungo esikhulu entshonalanga yeRomania. Sizobona namhlanje ukuthi kungani yaziwa njenge IVienna encane noma i Idolobha lezimbali...
2 Ukuvakasha kweTimaraara
Igama lisuselwa eHungary kanti izindawo zokuhlala zokuqala zabuyela emuva esikhathini, ngisho nakumaRoma. Ngemuva kwalokho kwenzeka ngeNkathi Ephakathi, ezungeze inqaba eyakhiwa uCharles I waseHungary, futhi kwakwaziwa ukuthi iyikho ngezikhathi zempi phakathi kwamaKrestu namaTurkey ase-Ottoman, idolobha elisemngceleniuku. Ngakho-ke, ihlushwe kaningi futhi yahlaselwa yaze yahlala ezandleni ze-Ottoman isikhathi esingaphezu kwekhulu nesigamu.
UTimisoara waphinde wanqotshwa yiNkosana u-Eugene waseSavoy ngo-1716 futhi wahlala ezandleni zeHabsurgs kwaze kwaba sekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX. Ngemuva kwempi yezwe yokuqala IHungary yanikezela lo muzi eRomania, futhi phakathi neMpi Yezwe II yathola umonakalo omkhulu. Ekugcineni, waba ngaphansi komjikelezo weSoviet, inani labantu landa futhi lalinemboni.
Idolobha ethafeni laseBanat, eduze nokwehlukaniswa kwemifula iThimis neBega. Kukhona ixhaphozi lapha futhi idolobha bekuyisikhathi eside ukuphela kwendawo lapho ungawela khona leyo ndawo.
Eqinisweni, ibisebenza njengesivikelo, yize ukusondela komswakama ongaka kwaletha izinambuzane eziningi kuyo. Ngekhulu le-XNUMX, ngenxa yemisebenzi yomphakathi, idolobha laqala ukuba semgodini weBega hhayi emfuleni iTimis, lapho-ke konke kwathuthuka.
Ngokwesiko bekuyidolobha elizinikele kwezokukhiqiza, kwezemfundo, kwezokuvakasha nakwezentengiselwano. Namuhla ine- Uhlelo lwezokuthutha ngemigqa eyisikhombisa yetram, amabhasi enqola ayisishiyagalombili kanye nolayini bamabhasi nje abangaphansi kwamashumi amabili. Futhi kukhona amabhayisikili omphakathi eneziteshi ezingama-25 namabhayisikili angama-300 angasetshenziswa mahhala, kokubili ngabantu bendawo nabavakashi, futhi kukhona i- vaporetto ezulazula esiteshini. Futhi umphakathi.
Idolobha alinayo iminyuziyamu eminingi njengamanye amadolobha aseYurophu, kepha uma ungesona isinambuzane esingamasiko ungahle uthande umqondo wokuthi akudingeki uvakashele iminyuziyamu nemipheme usuku lonke. Ngakho-ke, uTimisoara usinikeza i- iminyuziyamu ethokozisayo:
el ITimaraara Museum of Art Kuse-Unirii Square futhi kuyisakhiwo sekhulu le-10. Kukhona ubuciko bendawo, besimanje, bokuhlobisa, imidwebo nokuqoshwa nobuciko base-Europe jikelele futhi kuvame ukuba nemibukiso nemicimbi. Imali yokungena ibiza i-RON 10 futhi ivulwa kusuka ngoLwesibili kuya ngeSonto kusuka ngo-6 ekuseni kuya ku-XNUMX ntambama.
el IBanat National Museum limele isifunda. Isebenza eHuniade Castle, enkabeni yedolobha, esakhiweni esidala kunazo zonke edolobheni. Kuneminyango eminingana: isayensi yemivubukulo, umlando, isayensi yemvelo kanye ne ITraian Vuia Museum, Ezinikezelwe kumsunguli weRomania onegama elifanayo, iphayona lezindiza.
el Village Museum Kungasemaphethelweni eTimisoara, endaweni eluhlaza kakhulu futhi kukhombisa kahle ukuthi uyini umuzi wangempela. Inezakhiwo eziningana, isonto nomgayo, konke okwendabuko nezitayela ezivela ezikhathini ezihlukene nasezifundeni eBanat. Ukuhamba okuhle futhi kuseduze ne-zoo ukuze ukwazi ukuvakashela izindawo zombili. Ufika ngebhasi kanti ukungena kubiza u-5 RON. Inamahora ehlobo nasebusika.
el Umnyuziyamu Wabathengi WamaKhomanisi akuyona eyendabuko. Kuyinto umnyuziyamu ongajwayelekile okhombisa ngokunembile isikhathi sobukhomanisi sedolobha. Isebenza egumbini elingaphansi kweScart Bar, endlini endala enengadi enkulu. Yindawo enobungani ehlotshiswe kamnandi. Iqoqo lemnyuziyamu linakho konke futhi lakhiwa ngeminikelo evela kubangani nezivakashi. Konke okuphathelene nesikhathi sobukhomanisi. Uyithola kwaSzekely Laszlo 1 Arh.
el Isikhumbuzo seRevolution khumbula unyaka we-1989 lapho iSoviet Union ihlakazeka. Inguquko eRomania iqale lapha eTimisoara futhi iwuphawu lwedolobha. Le sayithi kufanele ibe yesikhashana nokuthi kwesinye isikhathi kuzoba nomnyuziyamu ngayo. Isikhumbuzo siseCalle Popa Sapca, 3-4 kanti ukungena kubiza i-10 RON. Kuvulwa kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, kusuka ngo-8 ekuseni kuya ku-4 ntambama nangoMgqibelo kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-2 ntambama.
Njengoba ubona, kuneminyuziyamu embalwa ngakho-ke kunesikhathi esiningi sezinye izinhlobo zokuvakasha. I-Timisoara idolobha elikhulu elinomlando osukela okungenani ngekhulu le-XNUMX, ngakho-ke manje hamba ezitaladini zawo Kuyintelezi.
Ngakho-ke, ekuhambeleni kokuqala akufanele uphuthelwe amaphuzu athile ngokukhethekile. Okungukuthi, i- Isikwele Union, okuyindala kunazo zonke edolobheni. Igama layo lisukela ngonyaka ka-1919, ngemuva kweMpi Yezwe Yokuqala, ngenkathi amabutho aseRomania ehlangana lapha ngemuva kokungena edolobheni.
Ine- umoya we-baroque kanti izakhiwo ezizungezile iSonto LaseSerbia Orthodox, iSonto LamaRoma Katolika, iBrück House neSigodlo SaseBaroque. Konke kuhle kakhulu. Kukhona nezindawo zokudlela ezinhle, ngakho-ke ehlobo kuyajabulisa kakhulu ukuhlala ubukele abantu. Esinye isikwele esithakazelisayo yi- IVictoria Square, eyaziwa nangokuthi i-Opera Square. Igama elisha lingemuva kokuwa kobukhomanisi.
Isikwele lesi sinezakhiwo ezimbili eziyizifanekiselo: Isonto lombhishobhi Orthodox kusukela ohlangothini lwaseningizimu kanye ne Inkundla yaseshashalazini kaZwelonke kusukela ohlangothini olusenyakatho. Yakhiwa ngekhulu lama-XNUMX ukufaka esikhundleni senqaba endala yasendulo, ngakho-ke inomuzwa we-Art-Noveau futhi kuhloswe ngayo ukungcebeleka, nezitolo, amathilomu namathalaji. Uma uya ngoKhisimusi, kukhona imakethe kaKhisimusi.
Okunye ukugibela okuhle hamba osebeni lomfula iBega. Noma yenza uhambo lwebhayisikili. Kuhle ngosuku olubalele futhi ungahamba ukusuka ekugcineni kuze kube sekupheleni kwedolobha, unqamula amapaki alo amakhulu. Ehlobo kunezindawo eziningi lapho ungajabulela khona ubhiya obandayo futhi lapho ilanga lishona futhi kuyindawo ethandwa kakhulu.
Ekugcineni, ngiyathanda ukundiza phezu kwamadolobha futhi lapha ungakwenza ngezindiza. Indiza isigamu sehora futhi ibiza cishe ama-euro angama-75. Futhi uma lapho ilanga lishona ufuna ukuphuma uyobona abantu, ngenhlanhla idolobha line- impilo yasebusuku esebenzayo. Isayithi elidumile kakhulu yi UD'arc, e-Unirii Square. Umculo omnandi, amanani aphakathi nendawo, athandwa kakhulu ngabokufika nabangaphandle. Ngenhlanhla ivulwa sekuhlwile, kusukela ngo-11: 5 kuye ku-XNUMX ekuseni.
Enye indawo ebusuku I-Reflektor, evulwe ngo-2017, ihholo lekhonsathi. Ama-80's Pub Ingenye yama-pub amaningi eTimisoara lapho ungaphuza futhi udanse khona. Akukho maphakathi nendawo, kepha uma uvela kuma-80s kufanelekile ukuvakashela ikhampasi yaseyunivesithi. I-Taine ne-Escape ngezinye izindawo zokudansa nokuzijabulisa.
Uyithandile iTimisoara? Kuyindawo efinyeleleka kalula (ubhiya ubiza cishe ama-euro angu-1, isidlo sasemini esingu-25), kuseduze namahora amathathu kuphela ukusuka eBudapest naseBelgrade namahlanu ukusuka eVienna.
Kungumuzi ukuthi thanda isiko, imikhosi yamafilimu nezeshashalazi, une i-gastronomy enhle futhi abantu bahle futhi amasiko amaningi. Ukwakhiwa kwayo kuhle, kunomlando, kunempilo yasebusuku, abantu bakhuluma kakhulu isiNgisi futhi njengeqiniso lomlando, iTimisoara kwaba idolobha lokuqala ukuzikhulula ngemuva kokuwa kobukhomanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » ERomania » I-Timisoara, ngentelezi yaseRomania